Waxaad aragtaa waxa aad rabto inaad ku guuleysato, qeexdo qaybaha lagama maarmaanka ah, oo ka dhig dhammaan wadajirta dhulka. Hase-yeeshe, caqabada koowaad, si kastaba ha ahaatee, waxay hubineysaa en cera walba ay ku habboon yihiin si siman iyo si aan kala go ‘lahayn.
En esta publicación, waxaan isbarbar dhigi doonaa sare FTP (Protocolo de transferencia de archivos) macaamiisha aad u isticmaali kartaa boggaaga WordPress.
Waqtigii hore, horumariyayaashu waxay ubaahanayeen macaamil FTP ah si ay u faylaliyaan faylasha shabakadahooda shabakadooda waxayna ka dhigi karaan inay isticmaalaan dadka isticmaala – inay ka helaan hantida muuqaalka bilaa kog koka.
Maanta, dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso waa gundhig u sameynta jaangooyada WordPress, soo qaado mawduuc, oo aad abuurto nuxur adigoo adeegsanaya interfaz muuqaal ah. Waxa kale oo es fududahay en lagu daro farsamooyinka iyo sii wado boggaaga adoo ka caawinaya plugins, kaas oo si toos ah loogu rakibay bakhaarka rasmiga ah ee WordPress.
Ilaa inta aad kashaqeyneyso koodhka oo aad hayso ilahaaga cusub, CMS waa inay awoodaan inay fuliyaan hawlahaas sida saacadaha shaqada. Laakiin haddii aad tahay nooca horumariye ee jecel fikradaha banaanka-ka-sareeya iyo koritaanka maxkamadaynta iyo qaladka, adiga waxay la kulmi kartaa khaladaadka qaarkood taas ayaa kaa xiri doonta CMS-gaaga. Tani waxay kaa saari doontaa ikhtiyaar la’aan laakiin inaad isticmaasho macaamil FTP ah oo wax ka qabato arinta gacanta.
Marcadores de Jiid-iyo-Jooji – Xayaysiinta waa muuqaal heer sare ah oo u sahli kara horumarinta inay diyaariyaan xisaabtooda FTP. Iyada oo CyberDuck ah, muuqaalka buuggu wuxuu isticmaalaa jiidis iyo kala-dhex-dhexaad ah – si sahlan loo isticmaalo heerarka cusub.
Cryptomator – Sabab kale oo loo doorto CyberDuck fue incluido en SFTP (Protocolo seguro de transferencia de archivos SSH). Laakiin xitaa haddii aad rabto inaad la socoto FTP, waxaad wali ku sugi kartaa xogtaada Cryptomator app, taas oo kuu ogolaaneysa inaad abuurto waraaqo codsi ah oo ku servidor saabsan kasta oo kasta ama hannaaniga kaydinta daru.
Dhamaynta Xeerka – Waxaa muhiim ah en la ogaado en tifaftiraha dhismaha ee nuqulkii lacagta la bixiyay uu ku yimid muuqaal gaar ah oo dhameystiran. Kaliya taasi ma badbaadin doonto waqti, laakiin waxay sidoo kale ka hortagi doontaa qaladaadka qalab ee keeni kara madax-xoqid la’aan.
Archivo ZIP Samee – Haddii aad u baahato inaad bogto boggaaga, waxaad ka faa’iideysan kartaa faylka hal-fure "FTP gratis" si uu u abuuro nuqullo ZIP ah oo loo diro wadooyinka maxalliga ah. Tani waxay hubineysaa inaad si dhakhso ah uga soo kaban kartid qaladaadka iyo faylasha khalkhalka leh.
Maamulaha Guryaha – FileZilla wuxuu la shaqeeyaa maamulaha goobta oo kuu ogolaanaya inaad keydiso macluumaadka boggaaga FTP. Waxay leedahay ikhtiyaari ah en la xiri karo xirmooyinka FTP, iyadoo la adeegsanayo aqoonsiyada login, iyo tilmaamida xiriirada SFTP.
Xaddidaadda Xawaaraha Khaaska ah – Haddii aad ka walwalsan tahay wareejinta FTP ee ku mashquulsan dhammaan xawaaraha internet-ka, waxaad dejin kartaa xaddidaadaha xawaareynta ee ka dhex socota bogga dejimaha FileZilla. Si fudud u etiqueta ‘editar’> ‘Configuraciones’> ‘Beddelka’ oo calaamadi "U oggolow xaddidaadaha xawaaraha".
Browser-Ku Saleysan – Adiga oo ah fidiye dheeraad ah, waxaad bilaabi kartaa isticmaalka Firaaqada Firfircoonida dhexdeeda. Kaliya waxaad ku dari kartaa isku-tooska tooska ah ee maktabadda fidinta dheeraadka ah ee Firefox-ka, waana fiican tahay inaad tagto.
Isku xirka iyo dib udhigelinta tooska ah – Haddii es dhacdo inaad lumiso xiriirka ku-meel-gaadhka ah, FireFTP si toos ah ayey u cusbooneysiisaa marka ugu horreysa ee xiriirinta internetka dib loo dhiso.
Raadinta Fudud iyo Filters – Interfaz FireFTP waxaa ka mid ah baaritaan isku mid ah iyo fiilo filter kaas oo ku sameeya laybereeriyada gudaha iyo kan fogba isla markiiba. Waxay taageertaa xaddiga raadinta ee horumarsan sida calaamad bannaan (–) loogu talagalay ka-reebista faylka, calaamaddaha dheeraadka ah (+) alaabta loo baahan yahay, iyo qiimaha ("") raadinta kalmado badan.
Xawaaladaha Xawaaladaha – Macaamilka FTP ee Premium, gudbinta 4 wuxuu kufaraa xawaaraha sare ee gudbinta faylalka, kaas oo saacidaya qiyaasaha 4 ee faylasha yar yar ee 30,000. Macmiilku wuxuu kaloo isticmaalaa wareejinta isku xirka badan, taas oo sahlaysa en la dhaqaajiyo tiro fara badan oo faylasha ah iyada oo aan xawaaraynin.
Iconos personalizados – Tani waxay noqon kartaa muuqaal medio ah, laakiin gudbin lejos ayaa kuu oggolaaneysa inaad isticmaasho sawirro gaar ah oo loogu talagalay "kuwa ugu cadcad".
Sida bilawga adduunka ee macaamiisha FTP, ka dibna FireFTP iyo CyberDuck ayaa ah kuwa ugu murugsan fursadaha ugu wanaagsan. Ma aha oo kaliya inay fududahay en la isticmaalo, waxay wali bixiyaan sifooyin gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala bilaashka ah. FTP lacag la’aan ah sidoo kale waa doorasho fiican oo bilawga ah, laakiin kaliya haddii aadan daneynin wax kale oo aan ahayn marka aad galiso server-kaaga FTP.
Farsamayaasha webka ee khibradaha leh, dhinaca kale, waxay heli kartaa FileZilla oo waxtar leh madaama es taageereyso mashiinnada badan. Ugu dambeyntiina, mulkiilayaasha bogagga oo hore u haystay gigabytes ee xogta online, ka dibna gudbin 4 waxay ku siinaysaa bangiga ugu fiican ee buck.
Trang web Abuuritaanka-ka WordPress waa sida dhisme guri leh leben Lego. Waxaad aragtaa waxa
Ang website ng Abuuritaanka-WordPress ay mas mahusay sa Lego. Waxaad aragtaa waxa aad rabto
Abuuritaanka website-ka WordPress waa sida dhisme guri leh leben Lego. Waxaad aragtaa waxa aad
Spletna stran Abuuritaanka-ka WordPress je sporočila, da je lego Lego. Waxaad aragtaa waxa aad
Abuuritaanka web sitesi-ka WordPress waa sida dhisme guri leh leben Lego. Waxaad aragtaa waxa
เว็บไซต์ Abuuitaanka- เวิร์ดเพรสที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นเลโก้. Waxaad aragtaa waxa aad rabto inaad ku guuleysato, qeexdo qaybaha lagama
44 maneras de convertirse en una autoridad en su nicho
Malo Opambana 30+ Omwe Amapereka Zithunzi Zaulere za Zithunzi & Zithunzi Za บล็อก
Cynghorion Blogger 30 ar Sut in Dyfu Bralni blog
Avada, X Theme или Enfold – три самых популярных многоцелевых WordPress темы на ThemeForest: По сравнению
Mobil Uyumlu Siteler Oluşturmak için 15 WordPress Teması
Agallamh óstach Yunanistan: Soru-Cevap POF CloudAccess.net Jonathan Gafill
6 Modi kif emitq aktar E-mailové registrácie na fóre il-Blog Tiegħek
Kuidas teha tootefotosid
8 consejos para acelerar tu sitio web
Kodigo por Infanoj: Lập trình cào
15 chủ đề WordPress cho thú cưng và bác sĩ thú y
Host Web สัมภาษณ์: WebHostFace CEO, Valentin Sharlanov
คำภาษาอังกฤษ: منازشرکتهایمیزبانی 28 برایپشتیبانیچتزندهدرخواستدادم
Mga Slide ni Designmodo – Isang Nakamamanghang Bagong Static Site Generator (Sinuri)
Etki Alanı Adınızı Etki Alanı Hırsızlarından Korumak için 6 İpucu
Čo sú bloky WordPress? Všetko, čo potrebujete vedieť …
Kontaktný formulár 7 Recenzia: Stále slušný bezplatný kontaktný formulár Plugin pre WordPress?
50+ Cele mai bune teme WordPress pentru constructori, contractori și companii de construcții